Tokyo waxay ku dhawaaqday COVID-19 xaalad deg deg ah laakiin Tokyo Olympics wali waa go?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Tokyo waxay ku dhawaaqday COVID-19 xaalad deg deg ah laakiin Tokyo Olympics wali waa go?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Raiisel wasaaraha Japan Yoshihide Suga
Magaalada caasimada ah ee Japan waxay galaysaa xaaladan cusub ee deg-degga ah wax ka yar seddex isbuuc ka hor inta aan la qorsheynin inay martigeliso Ciyaaraha Olombikada Tokyo ee 2020.
Xaalad deg deg ah oo cusub ayaa lagu wadaa in looga dhawaaqo Tokyo iyadoo ay kordhayaan kiisaska cusub ee COVID-19.
Xaalad deg deg ah oo cusub ayaa ka dhaqan galaysa aagga Tokyo laga bilaabo Luulyo 12 ilaa 22 Ogosto.
Tokyo waxay soo warisay 920 kiis oo cusub oo COVID-19 ah Arbacadii, wadarta guud ee maalinlaha ah tan iyo 13-kii Maajo.
Raiisel wasaaraha Japan Yoshihide Suga ayaa maanta ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah oo cusub lagu wado in looga dhawaaqo Tokyo iyadoo ay kordhayaan kiisaska cusub ee COVID-19.
Magaalada caasimada ah ee Japan waxay gashay xaaladan cusub ee deg-degga ah wax ka yar seddex isbuuc ka hor inta aan la qorsheynin inay martigeliso Ciyaaraha Olombikada Tokyo 2020.
Sida laga soo xigtay Raiisel Wasaaraha, xaaladda degdegga ah ee cusub ayaa ka dhaqan galaysa aagga Tokyo laga bilaabo Luulyo 12 ilaa 22 Ogosto.
Suga wuxuu sheegay in tirada dadka degan Tokyo ee uu ku dhacay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' ay sii kordheyso, talaabooyinka deg deg ahna ay ka adag yihiin xirida buuxda - waa inay gacan ka geystaan ​​sidii loo xakameyn lahaa faafida fayraska loona yareeyo culeyska isbitaalada ku yaala agagaaraha caasimada ee horeyba ugu dadaalayay inay bixiyaan wax ku filan. sariiraha.
Raiisel wasaaruhu wuxuu intaa ku daray inuu "qaadi doono dhamaan talaabooyinka suurtagalka ah" si looga hortago fiditaanka fayraska.
Xaaladda degdegga ah ayaa sidoo kale lagu kordhiyay Gobolka Okinawa, halka tallaabooyinka degdegga ah ee xaaladaha degdegga ah ee Osaka, Saitama, Chiba iyo Kanagawa sidoo kale la kordhin doono illaa 22-ka Ogosto.
Go'aanka rasmiga ah ee xaaladda degdegga ah ee Tokyo waxaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista kadib kulan ay yeesheen khubaro caafimaad.
Tokyo waxaa loo qorsheeyay inay martigeliso Ciyaaraha Olombikada 2020 laga bilaabo Julaay 23 illaa 8 Ogosto - sannad ka dib sidii markii hore loo qorsheeyay sababtoo ah dib u dhigis uu sababay cudurka COVID-19 ee faafa.
Waxaa jiray diidmo ballaaran oo dadweyne oo ka dhan ah dhacdada weyn ee isboortiga iyo olole gudaha ah oo lagu joojinayo in kastoo.
Sida laga soo xigtay ilo maxalli ah qaar ka mid ah, Ciyaaraha Olambikada waxay u badan tahay inay sii socdaan iyadoo aan daawanin, Ciyaaraha waxaa lagu qaban lahaa albaabada u xiran, in kasta oo ku dhawaaqista Suga aysan xaqiijin tan.
Qaban qaabiyaasha Olombikada 2020 Tokyo ayaa durbadiiba ku soo rogay xayiraad adag ciyaaraha, oo ay ka mid yihiin in laga mamnuuco daawadayaasha dibada iyo in lagu xaddido tirada taageerayaasha 10,000 ama kalabar awooda goob kasta.
ATB: Mar dambe looma dagaallamo ka -badbaada Dalxiiska Afrika
Ilaalinta wiyisha madow ee wiyisha ee Tanzania waxay qaadataa ...
Horjoogayaasha Dalxiiska ee nool ayaa loo aqoonsaday ...
Aadista Vegas? Xidh Maaskaro
Sydney waxay soo afjartay xiritaankeedii COVID-19
Fiji wuxuu ku sii jeedaa xagga dalxiiska oo dib loo furayo Diseembar 2021
Hoteellada Hawaii waxay ku kacaan lacag ka badan 1 bilyan oo doollar
Dalxiiska Gaarka ah wuxuu ku deeqay $ 2 milyan oo Kariibiyaanka iyo Aasiya ah
Argagax ayaa ku dhammaaday Afghanistan iyadoo Kabul ay hareereeyeen ...
Safarka Tareenka Khatarta ah ee Dalxiisayaasha - Ma Jirtaa ...
Yaraynta Saamaynta xun ee COVID-19 ku leeyahay Dalxiiska ...
Gaajada Caalamka Dhibaato Weyn Waxaad Dhahdaa Dadka Mareykanka Badankood
Sandals: Raaxada kaliya ee 5-xiddig ee adduunka ayaa ka mid ...
Dhammaan Thailand hadda waxay u furan tahay booqdeyaasha iyada oo aan ...
Bandhigga Koobka Carolina wuxuu ku soo baxaa Dabaqadaha Sare ee Paddle
UPDATE: Sheekada Aan Laheyn ee United Airlines ee COVID-19 ...